हत्याका घटनाहरू सुल्झाउने क्रममा राष्ट्रिय डीएनए डाटाबेसको सकारात्मक: मार्टिन भिजल्याण्ड
निस्सन्देह, सम्पूर्ण नेदरल्यान्ड्सलाई राहत दिईएको छ कि निकवी वर्स्टप्पिनको मामला योस ब्रेकको कप्तान भयो। पहिले, डीएनए मार्सियन विएस्ट्रा मामला मा जसपर स्टेरिंगा को कैद को कारण बन्यो, यसैले डीएनए परिणाम हो। यो कुनै पनि मामला मा देश को पत्रकारिता नायक पीटर आर डी वेल्स द्वारा शुरू गरिएको एक नयाँ कानूनी प्रणाली को नेतृत्व गरेको छ, अर्थात् 'मीडिया द्वारा परीक्षण'। त्यो पहिलो मुनाफा मुद्दा हो। आइपुगेको छ, यो केवल क्रिस्टल स्पष्ट छ कि यो ब्रेच यस हत्याको घटनामा अपराधी हुनुहुन्छ।
मेरो विचारमा, विश्वविद्यालयहरूले एजेन्डामा दुवै मुद्दाहरू राख्नुपर्छ र तिनीहरूलाई व्याख्यानमा अध्ययन सामग्रीको रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन आवश्यक छ कि सार्वजनिक अभियुक्त सेवाले मात्र यदि एक मामलाबाट अर्को डीएनए प्रयोग गरी आवश्यक भएमा नियमहरू उल्लङ्घन गर्न सक्छ। त्यो योस ब्रेकमा अनुमति दिइएको थियो र त्यसैले विद्यार्थीहरूले कसरी कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर कानून समायोजन कसरी गर्ने भनेर अद्भुत उदाहरण देखेका छन्।
यदि तपाईं एक वकील बन्नु र मोटी जेबको पैसा कमाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँलाई आफ्नो मुख बन्द राख्न र यस्ता कानूनी गलत कदमहरूमा वस्तु राख्नको लागि सिक्नु पर्छ। तपाईं क्लबको हो जुन नयाँ 'मिडिया प्रणाली' द्वारा परीक्षण निर्माण गर्न योगदान गर्दछ। त्यो एक प्रतिष्ठित स्थान हो। पछिल्लो तर कम से कम एक राम्रो वकील हुन छाप दिन ताकि, तर अब कानुनी गलत ट्रयाक बाट दर्शक अलमल्याउन तपाईं कसरी शर्मिंदगी छलफलहरू र टिभीमा न्यायाधीश पत्रुस आर डी Vries संग टिभीमा बहस सिक्न बोक्न । एक वकील को रूप मा तपाईं जेनेन पउउ जस्तै जस्तै विचार प्रबंधकहरु र पीटर आर डी वेल्स जस्तै भावनात्मक खेलाडीहरु को नै एनएलपी प्रविधीहरु लाई मास्टर गर्न को रूप मा। यो एक PsyOp वकील हुन एक राम्रो काम हो। यसले प्राय: एक छुटकारा दिन्छ मोटो मर्सिडीज मा।
तपाईं हरेक ठाँउ डीएनए पत्ता लगाउन र सबै ठाडो रहन सक्नुहुनेछ, किनभने तपाईं वास्तवमा यसलाई कसैबाट लिन सक्नुहुनेछ। एकपटक तपाईंको कुनै डीएनए भएपछि तपाईं यसलाई एक अपराध दृश्यमा राख्न सक्नुहुन्छ; यदि चाहियो, अंडरवियरमा वा जहाँ पनि तपाईं चाहनुहुन्छ। यो निकी वर्स्टपेनको मामलामा भएको छैन। त्यो विचारधारा विचार हुनेछ र तपाईं त्यो चाहनुहुन्न। संयोग, यो डीएनए सिंथेटिक synthesize पनि सम्भव छ, तर यो कहिल्यै कहिल्यै न्याय गर्दैन र केहि जस्तै कि तपाईं सबैको डीएनएमा रहेको एकपटक चाँडै अति उत्तम हुन्छ। तर, हामी सकारात्मक र आशावादी छौं। सामान्यमा तपाइँ भन्न सक्नुहुन्छ कि यो एक राष्ट्रीय डाटाबेसको सबै को डीएन को रोक्न केवल उपयोगी छ। त्यो केवल उपयोगी छ किनकी यो सबै औंठाछाप र सबैको फोटोहरू पाउनको लागि उपयोगी थियो। यदि कसैलाई हत्या भएको छ भने, तपाईले गर्नु पर्छ सबै को डीएनए भेटिन्छ र तपाईं अपराधी छ। यो सरल छ। तपाईलाई थाहा छ अब म स्वीकार गर्न सक्छु?
यदि तपाईं आफ्नो पड़ोसीको साथ कफी पीइरिरहनुभएको छ भने, तपाईंको डीएनए निस्सन्देह कहीं कुर्सी, तालिका वा कफी कपमा छ। यदि त्यही छिमेकीलाई त्यसपछि मृत दुई दिन फेला र अपघटन पूरा अवस्थामा उनको शरीर छ भेटिएन भनेर घर मा स्थित छ पत्रुस आर डी Vries मात्र बस tweet गर्छ भन्दा (NFI यो पनि हत्या वा यौन दुर्व्यवहार देखाउन असम्भव बनाउने) : हामीले उहाँलाई पाउनुभयो! त्यसपछि आफ्नो वकील मात्र Jeroen Pauw पार दूषण बारेमा babbling के र तर्क गर्न प्रसारण मा आउन सक्छ, तर यो पहिले नै स्पष्ट छ: तपाईंले आफ्नो छिमेकीलाई को हत्यारा हो; चाहे वा होइन कि उसले हत्या गरेको छ। अन्यथा, त्यहाँ तपाईंको पड़ोसी जस्तै तपाईंको पीसीमा केहि नग्न तस्विर हुन सक्छ। यो तब 100% हो भने तपाइँले पनि डाउनलोड गरेको छ, किनभने सरकार र न्यायपालिकाले तपाइँको पीसीमा चीजहरू राख्ने कुनै अधिकार छैन। खैर, तिनीहरू वास्तवमा ती अधिकारहरू छन्, तर निस्सन्देह तिनीहरूले कहिल्यै गर्दैनन्। आउनुहोस् हामी सबै प्रकारको अज्ञात परिदृश्यहरूसँग आउँदैनौं। मात्र राष्ट्रीय डीएनए डेटाबेसको बारे आशावादी र सकारात्मक हुन दिनुहोस्। यो बस आउनु भएको छ!
यो राम्रो तरिकाले हामी एक मनोवैज्ञानिक सञ्चालन (PSYOP) र hyped हत्या अवस्थामा एक offender बनेको छ जसमा मार्फत प्ले छ, तर समग्र हामी अझै पनि सबैलाई बस उपयोगी को डीएनए भइरहेको भन्ने मान्छु सक्नुहुन्छ हुन सक्छ। तपाईं सबै प्रकारका मामिलामा समाधान गर्न सक्नुहुन्छ; यद्यपि तपाइँ यसलाई घुमाउनुहोस् वा घुमाउनुहोस्। र कहिलेकाहीँ तपाईं मान्छे मा केहि कठिन राख्न सक्षम हुनु चाहानुहुन्छ यदि तपाईं फरक तरिकामा टेलल गर्न सक्नुहुन्न भने। किन होइन?
वैसे, 18 अन्तर्गत धेरै बच्चाहरु पहिले देखि नै डीएनए म्याप गरिएको छ किनभने लक्षित समुहले एड़ी प्रहार गरेको छ। ती डीएनए प्रोफाइलहरू RIVM मा स्वच्छ रूपमा (अझै पनि केही हदसम्म अवैध, तर राम्रो) छन् तहखानेमा। यो सकारात्मक भाग - जस्तै आशावादी रूपमा सोचेको छ - यदि तपाइँ हरेक डचको व्यक्तिको लागि दर्जी-बनाइएका टीकाहरू बनाउन सक्नुहुनेछ, तपाइँ आफ्नो डीएनएलाई तपाइँका आवश्यकताहरू अनुरूप गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईसँग अल्जाइमरको आनुवंशिक भविष्यवाणी छ भने, तपाइँ यो टीभीको मिश्रण थप्न सक्नुहुन्छ जुन डीएनए को यो टुक्राको मरम्मत गर्नेछ। यो सम्भव छ किनकि हामीले केही वर्षको लागि CRISPR विधि थाहा पायौं, जहाँ निर्दिष्ट कोड (कि आनुवंशिक predisposition को लागि उत्तरदायी) पत्ता लगाइएको र बरामद कोडद्वारा प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं वृद्ध व्यक्तिहरूलाई आफ्नो वार्षिक फ्लू भाइरसलाई आफ्नो टीकामा केही थप प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसको परिणामस्वरूप उनीहरूको पूर्वनिर्धारित अल्जाइमरको आपसे मरम्मत हुनेछ। त्यो एक शानदार विकास हो! यसैले तपाईले सबैलाई डीएनए प्रोफाईल पाउन चाहानुहुन्छ! उदाहरणको लागि, तपाईं एक सानो समायोजन गरेर आलोचनात्मक रूपमा सोच्नको लागि केहि थोरै प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई पनि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, तपाईंले पहिले नै भ्याक्सिन मार्फत पागल व्यवहार विकारहरू रोक्न मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। त्योको रूपमा ठूलो अवसर हो!
हो, अहिले व्यवस्था तपाईं मात्र डीएनए प्रयोग कानुनी अनुसन्धान मा भनेर र केवल र केवल डीएनए घट्यो छ जसमा अनुसन्धान को लागि, तर भाग्यवस मामला Nicky Verstappen यो चाँडै राम्रो चिल्लो समायोजित हुन सक्छ हुन सक्छ। र नजिकैको भविष्यमा क्यासिनो अनिवार्य हुनुपर्दछ भने, तपाइँ यस्तो एक टीकामा राम्रो उपहार दिन सक्नुहुन्छ। निश्चित रूपमा दर्जी-निर्मित टीकाहरू चाहिन्छ, तर यदि तपाइँ जान्नुहुन्छ कि क्लिनिकमा आउछ, त्यो ठीक छ। त्यो कति सुविधाजनक छ? यदि तपाइँ सजिलै अनुकूलित टीकाहरु संग लाइन मा सभ्य नागरिक बनाउन सक्नुहुन्छ यो कति सुविधाजनक छ। तपाईं GGZ तथ्याङ्कहरू र अपराध विवरणहरू 10 वर्ष भन्दा बढी देखिन्छ जस्तो लाग्छ? राम्रो! यो वास्तवमा केवल देशको चासोमा छ।
संयोग, तपाईं यसलाई एक राज्यको रूपमा मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। सबै पछि, तपाइँले अंग कानुनको माध्यमबाट तपाईंको नागरिकको शरीरको कानूनी स्वामित्व प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसोभए मानिसहरूले अझै पनि चयन गर्न चाहन्छन् वा चाहे उनी दानको फायदाको लागि आफैले टाढा राख्न चाहन्छन्, तर त्यो वास्तवमा तपाईलाई चिन्ता थिएन। शरीर अहिले राज्यको व्यवस्थाद्वारा नियमन गरिएको छ। र तपाईंको के होईन के हो। तपाईं यो पनि सडक सञ्जाल र भवन आदिरेरासँग गर्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो नागरिकको शरीर संग गर्न सक्नुहुन्छ।
एक डीएनए डाटाबेस यसैले निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ र हामी त्यो बारेमा आशावादी हुनुपर्दछ। निस्सन्देह तपाईसँग सधैँ ती क्यान्सर विचारकर्ताहरू छन् जो एकतावादी बहादुर न्यू वर्ल्ड स्टेट र सामानको बारेमा सुरु गर्ने कुरा हो, तर तिनीहरू निराशावादी छन्। यदि तपाईं एक आशावादी हुनुहुन्छ भने तपाई सधैँ सम्भावनाहरू हेर्नुहुन्छ र बाकी तपाइँ लोकतान्त्रिक रूपमा चयन गरिएका राजनीतिज्ञहरूको नैतिक अन्तरदृष्टिमा छोड्नुहुन्छ, जसले केवल 1 उद्देश्यको सेवा गर्दछ: तपाईंको लागि एक राम्रो संसार!
स्रोत लिङ्क सूची: trouw.nl
जोस ब्रेक हो 100% निकई वर्टपपेनको हत्यारा र यौन दुर्व्यवहार र सार्वजनिक रूपमा बुटवल हुनुपर्छ!
ट्याग: डेटाबेस, डेटाबेस, dna, विशेष, जोस ब्रेच, राष्ट्रभर, Marianne Vaatstra, Nicky Verstappen, पीटर आर डी देम्स
26 सेप्टेम्बर 2018 मा 14: 40
"शरीर अहिले राज्यको व्यवस्थाद्वारा नियमन गरिएको छ"
के तपाईं मृत घोषित हुँदा मात्र यो मामला होइन? वा राज्यको अंग हुन् जब तपाईं मृत घोषित हुनुभएको छ र संकेत दिएको छैन कि तपाई यसलाई अनुमति दिनुहुन्न?
तपाईंको कलाकृतिको लागि धन्यवाद, यो स्पष्ट छ कि तपाईं कसरी सावधान हुनुपर्छ र संदिग्ध तपाईं संग / राज्य र यसको सबै कानुनको तुलनामा। तिनीहरू अगाडी जान्छन् र ठूलो बहुसंख्यक यो अन्धा हो। वा एक मात्र थिङ्कहरू जुन धेरै अन्धा हो। यसले एउटै प्रभाव दिन्छ ...
26 सेप्टेम्बर 2018 मा 18: 03
त्यस प्रश्नको बारे सोच्नुहोस् ...
अहिले वास्तविक कानूनी स्थिति के हो? के राज्य तपाईंको अंगहरूको मालिक हो? राज्य तपाईंको सम्पूर्ण शरीरको मालिक हो?
म भन्नुहुन्छ: हो
1 अक्टोबर 2018 मा 09: 44
ओर्गेन्सहरू मानिसबाट लिइएका छन् जसले मृत्युको विनाश र मृत्यु भएका छन्, समेत व्यावहारिक हुन सक्छ। कुनै पनि अवस्थामा, अंग निकासीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पहिले देखि नै छ, यदि यो स्पष्ट हुन्छ कि मरीजको स्वास्थ्य बिग्रेको छ र उसले अब बचत गर्न सक्दैन, केवल बाँच्ने केही घण्टा मात्र बाँकी छ। यो तब 'गलत' पछि बोल्नको लागी गलत छ, किनभने मर्मत निश्चित रूपमा मरेको छैन। मस्तिष्कको मृत्यु कसैलाई मार्नको लागी डिजाइन गरिएको छ यदि मस्तिष्क कार्यहरू वर्तमान उपकरणको साथ मापन गर्न सक्दैन। विगतमा विटामिनहरू अवस्थित थिएनन् किनभने तिनीहरू प्रदर्शन गर्न सकिएन। अब तिनीहरू सोच्छन् कि उनी विज्ञानमा सबै चीजहरू जान्छन्, तर तिनीहरू के अहिले जान्छन् के धेरै वर्षमा मिति भन्दा बाहिर छ।
26 सेप्टेम्बर 2018 मा 16: 15
प्रसारण मयुर 21-09 Jl। Roethof कराउछ जहाँ विशेष गरी भाग यसको सबै भन्दा राम्रो मा एनएलपी टुक्रा धेरै रोचक छ "म अब लाग्यौं छु ..", यो मलाई मात्र शक हामी हेर्दै छन् बलियो के गरे जनताको लागि थियेटर 'एक देश जहाँ झूटो राजमार्गको अधीन छ विनाश हुन्छ
https://www.npostart.nl/pauw/21-09-2018/BV_101388634 (16 बाट: 08)
27 सेप्टेम्बर 2018 मा 19: 24
होईन विशेष गरी कसरी मोरले स्पष्ट रुपमा कसरी संबोधित गर्दछ र तुरुन्तै रक्षामा गोली हान्छ।
26 सेप्टेम्बर 2018 मा 20: 04
ईश्वर-पराजित, तपाईं सबैलाई थाहा छ कि एक धेरै राम्रो कार्यक्रम चलिरहेको छ जुन तपाईं को भाग हुनुहुन्छ?
कृपया मलाई पेश गर्नुहोस्, यो तिमी हो।
26 सेप्टेम्बर 2018 मा 20: 51
मेरो अन्तिम पोस्ट झिक्दै थियो, फेरि योसँग।
मेरो छोराछोरी छैन, तर डीएनए पहिले नै धेरै धेरै योजनामा ​​छ!
26 सेप्टेम्बर 2018 मा 21: 28
26 सेप्टेम्बर 2018 मा 21: 41
27 सेप्टेम्बर 2018 मा 17: 07
नेदरल्यान्ड्स र यसको निवासी को राज्य दुई शक्तिशाली फोटोहरुमा प्रतीक भएको छ:
"मानिसहरूले फेरि पुनर्विचार गर्दैनन्। उनीहरूले नराम्ररी हेरिरहेका छैनन् कि उनीहरूको चित्त बुझेका छन् ती कुराहरूलाई अझ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। "
- एरिक ए ब्लेयर (उर्फ जर्ज ओवेल) बुकमार्क: 1984 (1949)
« त्यसो भए कि Gerald Roethof जोस ब्रेक मामला मा एक PsyOp वकील प्रतीत हुन्छ
हाम्रा केटाकेटीहरूले ठूलो आक्रमण गरे। राम्रो छ कि पुलिस छ! »
कुल भ्रमण: 13.933.780